Home » Akụkọ njem » Ndị agha UK kwadebere maka ọrụ Ebola nke Sierra Leone
Ndị agha UK kwadebere maka ọrụ Ebola nke Sierra Leone
LONDON, England - Mịnịsta na-ahụ maka ndị agha Mark Francois toro ndị ọrụ agha na-aga ọzụzụ ahụike iji nyere aka gboo oria Ebola na ọdịda anyanwụ Africa.
Ihe karịrị ndị otu 100 nke ndị agha Britain nke 22 Field Hospital na-akwado ịnye ngalaba ọgwụgwọ 12-bed maka ndị ọrụ ahụike na Sierra Leone.
Taa, Mr Francois hụrụ ọzụzụ ọzụzụ na Army Medical Services guzobere na Strensall, nke ezubere iji zụlite ma nyochaa usoro ọgwụgwọ na nhazi chọrọ.
Ndị ọrụ rụrụ akụkụ ahụ mmega ahụ na ngwa nchekwa onwe onye na hangar tụgharịrị gaa n'ụlọ ọgwụ n'ọhịa na-akwa emo, na-emeso ndị nwụrụ anwụ echebara echiche iji mee ka ọnọdụ ha tụrụ anya ịchọta mgbe ha tinyere.
Mazị Francois kwuru, sị:
Oria oria Ebola na-anochite anya ihe egwu zuru uwa na aru ike nke ndi mmadu ma anyi agaghi ada n’echeghi. Ndi UK abiala n’ihu n’ibia oria ojoo a ma ndi dibia anyi n’aga n’iru ga aru oru di uku nke ndi injinia agha, ndi nhazi, ndi DFID na ndi FCO na ndi NGO.
Ọrụ a ga-agụnye ihe ịma aka dị iche iche, mana ekwenyere m na ndị ọrụ agha anyị, bụ ndị anyị nwere obi ụtọ nke ukwuu, nwere ikike inye nkwado maka Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-enyere aka iweta ntiwapụ ahụ.
Ndị ọrụ agha ga-eziga Sierra Leone n'izu na-abịa ebe ha ga-esonyere ndị injinia na ndị nhazi agha bụ ndị nọworo na mba ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa, na-elekọta owuwu nke ụlọ ọrụ ahụ ike.
Ọchịagha 2 Medical Brigade, Brigadier Kevin Beaton, kwuru:
Anyị emeela mkparị zuru ezu banyere gburugburu ebe obibi anyị ga-arụ ọrụ ozugbo eburu, na-enyere ndị ọrụ anyị aka ịmara usoro ha ga-arụ yana akụrụngwa nchedo onwe ha, na-arụ ọrụ n'ọnọdụ siri ike.
Anyị kwenyere na nke a bụ ebumnuche bara uru ịme, yana ihe egwu dị mkpa iji chebe ndị anyị ka anyị na-ebute oria Ebola.
Facilitylọ ebe a nwere akwa-iri na abụọ bụ otu ụzọ UK siri etinye aka n'ịlụso ọrịa Ebola ọgụ. N'iji ndi okacha amara nke Britain na ndi oru ngo ulo, UK ekwela nkwa imeputa akuku aru maka onu ogugu 12.
Otu ndị agha karịrị ndị agha 40, gụnyere ndị na-ahụ maka logist, ndị nhazi na ndị injinia, nọ na Sierra Leone ugbu a iji lekọta owuwu nke ụlọ ọrụ UK dị nso na Freetown ma mepee saịtị maka ụlọ ọrụ ọhụrụ.
UK ga-ewu opekata mpe ụlọ ọrụ ọgwụgwọ Ebola ọhụrụ anọ dịdebere etiti obodo mepere emepe gụnyere Port Loko, Freetown, Makeni na Bo.